एमाले पार्टीले निलम्बन गरे पछि यसरी रोए माधवकुमार नेपाल !:: Mero Desh
Published on: १७ चैत्र २०७७, मंगलवार ०९:४०
“काठमाडौ । नेकपा एमालेले नेता माधवकुमार नेपाल र भीम रावललाई ६ महिनाका लागि पार्टीवाट निलम्बन गरे को छ । पार्टीको विधानविपरीत चलेको भन्दै नेता नेपाल र रावललाई कारबाही गरेको हो। पार्टीको चैत्र ७ गतेको केन्द्रीय कमिटीको बैठकले सोधेको स्पष्टीकरणको चित्त बुझ्दो जवाफ नदिएको भन्दै ६ महिनाका लागि पार्टी साधारण सदस्यबाट नै निलम्बन गरेको छ।
“उनले नेता नेपाल रुँदै गरेको तस्विर सार्वजनिक गर्दै भनेका छन्,”स्पष्टीकरण सोधि विधि, पद्धती र प्रक्रिया पूरा गरेर यो कार्य गरिएको हो । जबकि, प्रचण्ड नेपाल ले स्पष्टीकरण नै नसोधी कंगारु कोर्टले जस्तै हामीलाई कथित लिनम्बन गरेका थिए ।”
“काठमाडौं। माओवादी, नयाँ शक्ति हुँदै मधेस केन्द्रित दलमा पुगेका पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई अहिले चौ’तर्फ उपेक्षामा छन्। मधेश केन्द्रित संगठन र नेताहरु को बाहुल्यता रहेका दलहरुबीच ए’कीकरण गरेर पहाडी क्षेत्रमा समेत दलको संगठ”न विस्ता”र गर्ने भनिए पनि भट्टराईले जसपामा गएर पार्टीलाई पहाडी र हिमाली षेत्र मा विस्तार गर्न त सकेनन् नै अहिले पार्टीभित्र उनी आफैं उपेक्षित छन्।
“पार्टीको संगठन बाबुरामको नयाँ श’क्तिको पालामा जस्तो थियो उस्तै नै छ। उनले पार्टीमा संघीय परिषदको अध्यक्ष को जिम्मेवारी त पाएका छन् तर उनको सुनुवाइ भने भइर हेको छैन। भट्टराई पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई जसरी पनि हटाउ”नुपर्ने पक्षमा छन्। ओली हटाउने अभियानमा अर्का नेता उपेन्द्र यादव पनि छन्।
“तर, महन्थ ठाकुरसहित तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टीका नेताहरु भने ओलीसँग सहकार्य गर्ने पक्षमा पुगिसकेका छन्।बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादव लगायतका शीर्ष नेता हरुसँग छलफल नै नगरी प्रधानमन्त्री ओलीसँग सत्ता साझे दारीका लागि कार्यदल गठन गरेका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले अहिले त्यो कुरालाई धेरै अगाडि बढाइसकेका छन्।
“ट्वीटरबाट धारणा राखेका भट्टराईलाई ट्वीटेहरुले नै जवाफ दिन्छन् जुन जवाफले राजनैतिक रुपमा कुनै तुक राख्दैन। भट्टराईको यो निरीह स्थितिले दुई प्रश्न जन्माएको छ । के उनी पार्टीभित्रै कुरा राख्न नस’क्ने, आफ्नो एजे’ण्ड मा छलफल गराउनै नसक्ने अवस्थामा पुगेका हुन्? वा उनी अरु कसैको स्वा’र्थमा निरन्तर प्रधानमन्त्रीविरु’द्ध लागिपरेका छन्?
“पछिल्लो समय समाजवादी पार्टीको राजपा पक्ष प्रधान मन्त्री ओलीलाई सहयोग गर्ने सहमति नजिकै पुगिसकेको छ। सरकारले मधेस आन्दो ल”नसँग सम्बन्धित देशभर रहेका सबै मु’द्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेसँगै जनता समाज वादी पार्टी (जसपा) लाई सरकारमा सहभागी हुने बाटो खुलेको हो।
“जसपाले सरकारमा सहाभागी हुन सरकारसँग चारवटा माग राखेको थियो। ती मागमध्ये मधेस आन्दोलनसँग सम्बन्धित मुद्दा फिर्तालाई मुख्य माग बनाएको थियो। बिहीबार बसेको मन्त्रि परिषद बैठकले मधेस आ’न्दो ‘लनसँग सम्बन्धित सबै मु’द्दा फिर्ताका लिने निर्णय गरे पछि जसपा लाई सरकारमा सहभागी हुन वा बाहिरै बसेर सरकारलाई समर्थन गर्ने बाटो खुला भएको हो।
“ट्वीटरबाट धारणा राखेका भट्टराईलाई ट्वीटेहरुले नै जवाफ दिन्छन् जुन जवाफले राजनैतिक रुपमा कुनै तु’क राख्दैन। भट्टराईको यो नि’रीह स्थितिले दुई प्रश्न जन्माएको छ । के उनी पार्टीभित्रै कुरा राख्न न’सक्ने, आफ्नो ए’जेण्डमा छलफल गराउनै न’सक्ने अवस्थामा पुगेका हुन्?
“वा उनी अरु कसैको स्वार्थमा नि’रन्तर प्रधान मन्त्रीवि रु’द्ध लागिपरेका छन्? शनिबार मात्रै माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले सरकारलाई दिए को समर्थन फिर्ता नलिन आफूलाई निकै ठूलो द’बाब भएको बताएका थिए।
“प्रचण्डले आफूलाई निकै द’बाब भए पनि अब भने आफ्नो नै’तिकताले सरकारलाई समर्थन गरिरहन नदिने भएकोले अब समर्थन फिर्ता लिने बताएका थिए।प्रचण्डले द’बाब कसको हो भनेर खुलाएनन्। भट्टराईको पछिल्लो स्थिति पनि प्रचण्डकै जस्तो हो कि भन्ने आ’शंक पनि बढेको छ।
“अर्को आशंका हो भट्टराई अरु कसैको एजेण्डा मा त चलिरहेका छैनन्। ओली सरकार नेपाल भित्र मात्रै नभएर विदेशी शक्तिको आँखामा समेत बिझाइरहेको छ। यस्तोमा ओलीलाई विस्थापित गर्न चाहने कुनै विदेशी शक्तिको गोटी भएर उसको स्वार्थअनुकूल पो भट्टराई चलिरहेका छन् कि भन्ने आ’शंका समेत गर्ने ठाउँ छ।यदि यस्तो नभए पार्टीका संघीय परिषदका अध्यक्षको कुरा पार्टीभित्र सुनुवाइ नहुने स्थिति नआउनुपर्ने थियो।
“अध्यक्ष हुँदाहुँदै पनि आफ्नै पार्टीभित्र भट्टराई उपेक्षित छन्, यो देखिएको कुरा हो। तर, उनको यो स्थितिको का’रण के हो भन्ने अहिलेसम्म प्रस्ट छैन। विकसित राजनैतिक घट’नाक्रमसँगै त्यो कारण पनि खुल्दै जाला भन्ने आशा भने गर्न सकिन्छ।श्रोत खबरमाण्डु।